Seddex Xiddig Oo Kabtan U Noqon Kara Arsenal Ka Dib Qirashadii Walwalka Laheyd Ee Uu Sameeyay Aubameyang | Laacibnet.net
Seddex Xiddig Oo Kabtan U Noqon Kara Arsenal Ka Dib Qirashadii Walwalka Laheyd Ee Uu Sameeyay Aubameyang
Kabtanimada Arsenal ayaa noqotay mid sumeysan, iyadoo dhibanihii ugu danbeeyay uu noqday Pierre-Emerick Aubameyang. Kaliya seddex gool oo Premier League ah uu dhaliyay xilli ciyaareedkan, Aubameyang ayaa ku dhibtoonaya qaab ciyaareedkiisa iyo kalsoonidiisa isagoo qirtay inay ku adag tahay inuu kiciyo asxaabtiisa kooxda.
“Aad ayay iigu adag tahay inaan isku qabto shaqadeyda shaqsiga iyo tan kabtanimo laakiin waa inaad noqoto qof niyadsan sababtoo ah kooxda ayaa kuu baahan.” ayuu 31 jirkaan u sheegay Sky Sports.
“Waxaan mar walba isku dayaa inaan shaqadeyda ugu fiican soo bandhigo, kaliya ma ahan garoonka dhexdiisa laakiin xitaa qolka labiska. Mararka qaar waa ay adag tahay madaama uu jawiga iga wareersan yahay laakiin waxaan ku qasbanahay inaan isbedelo oo aan niyad wanaag ka dhex abuuro qolka labiska.:
Arsenal farxada waa ay ku yareyd xilli ciyaareedkan iyadoo 14 dhibcood ka helay 14 kulan oo ay ciyaareen taasoo ka dhigeysa natiijadoodii ugu xumeyd ee tan iyo xilli ciyaareedkii 1974-75.
Inkastoo kooxda Mikel Arteta ay boorka iska jafeen kulamadii ugu danbeysay iyagoo badiyay afar kulan oo xiriir ah tartamada oo dhan hadana Aubameyng weli boorka iskama jafin.
Sida uu xiddiga reer Gabon ku noqday kabtanimada ayaa aheyd si muran ku jiro, iyadoo tababarihii hore Unai Emery uu ka qaaday kabtanimada Granit Xhaka oo ay isku dhaceen taageerayaasha halka Mikel Arteta markii uu yimid uu go’aansaday inuu Aubameyang sii ahaado kabtanka kooxda.
Laakiin madaama Aubameyang uu haatan dooneynin inuu sii ahaado kabtanka kooxda, waxaa jira seddex xiddig oo u sharaxan inay ka bedelaan mas’uuliyadaan.
Waxaa ugu horeeya Hector Bellerin, daafaca midig ee reer Spain waa xiddiga labaad ee ugu mudada dheer ciyaartoyda haatan ee Arsenal kaliya Ozil ayaa ka waqti dheer isagoo jooga Gunners muddo lix sannadood ah. Wuxuu haatan kabtan ku xigeen u yahay Aubameyang, waana xiddig ay jeclaayeen Wenger iyo Unai Emery haatana uu jecel yahay Mikel Arteta.
Rob Holding oo uu soo saaray Arsene Wenger ayaa isna ah xiddig kale oo noqon kara hogaamiyaha kooxda. 25 jirkaan oo dhawaan saxiixay qandaraas cusub ayaa ah hogaamiyaha daafaca isagoo mar walba dhiirogeliya ciyaartoyda mana ahan mid ka la ganbada fekerkiisa marka ay wax qaldamaan.
Kieran Tierney inkastoo uu kooxda joogo kaliya 18 bilood hadana waa xiddiga kaliya ee kulan walba nafta dhinac dhiga isagoo ku ciyaara xamaasad iyo xafiiltan. Halyeeyada Gunners sida Ian Wright ayaa ku tilmaamay in Tierney uu leeyahay hidosidaha Gunners islamarkaana uu yahay kabtanka mustaqbalka.
Shaxda Rasmiga Ah Ee Kulanka Southampton vs Arsenal - Aubameyang Oo Maqan Iyo Xiddigaha Ugu Soo Bilowday Labada Kooxood